နည်းပညာအသစ်များ - အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ | အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင် (စာမျက်နှာ ၂)
ဒီဆောင်းပါးမှာ ABS ပလတ်စတစ်နဲ့သူတို့သိထားတာတွေအကြောင်းမင်းသိထားသင့်တာအားလုံးကိုပြောပြပါမယ်။ ဤနေရာတွင်ပိုမိုလေ့လာပါ။
ဒီဆောင်းပါးမှာ aquaponics ဆိုတာဘာလဲနှင့်၎င်းရဲ့နည်းစနစ်ကိုသင်သိဖို့လိုအပ်သမျှကိုသင်ပေးပါတယ်။ ဒီထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
osmosis နှင့် reverse osmosis
ဤဆောင်းပါးတွင် osmosis နှင့် reverse osmosis ဖြစ်စဉ်များနှင့်၎င်းတို့မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကိုသင်သိထားသင့်သည့်အရာအားလုံးကိုရှင်းပြထားသည်။
INNEngine မော်တာ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများ၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့်အားသာချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်ရှင်းပြပါသည်။ ထိရောက်သောအင်ဂျင်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ပွင့်လင်းမြင်သာသောသစ်သားနှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိထားသင့်သမျှကိုပြောပြပါမည်။ ဒီတီထွင်မှုကိုဘယ်လိုထုတ်လုပ်သလဲဆိုတာကိုလေ့လာပါ။
ဤပို့စ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အား ၄ င်းတို့၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်စျေးနှုန်းများနှင့်သက်ဆိုင်သောစျေးပေါသောလျှပ်စစ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်များကိုအကျဉ်းချုပ်ပေးပါမည်။ သင်မည်သည့်အရာနှင့်အသင့်တော်ဆုံးလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ရန်ထည့်ပါ။
ဤပို့စ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားမော်တော်ဆိုင်ကယ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မျိုးစပ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများ၊ အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များအားလုံးကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်။ ဤနေရာတွင်ဤအကြောင်းအရာအားလုံးကိုလေ့လာပါ။
graphene ဘက်ထရီဆိုတာဘာလဲ၊ သူတို့ရဲ့ကွဲပြားတဲ့အသုံးချပရိုဂရမ်တွေကဘာလဲ။ ၎င်း၏အသုံးပြုမှု၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုသိ
Opel Corsa-e အသစ် ၁၀၀% လျှပ်စစ်မော်ဒယ်လ်
ဤဆောင်းပါးတွင် Opel Corsa-e သည်လျှပ်စစ် DNA တွင်ရှိခြင်းနှင့်မည်သည့်ပြောင်းလဲခြင်းနည်းပညာကိုဖော်ပြသည်။ ယခုလာပါ။
ဒီဆောင်းပါးမှာဇီဝနည်းပညာဆိုတာဘာလဲ၊ မတူကွဲပြားသောအမျိုးအစားများနှင့်မည်သည့်နေရာများတွင်တီထွင်သည်ကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သည်။ ပိုမိုလေ့လာလိုပါကဤနေရာတွင်ဝင်ပါ။
Hybrid ကားများ၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူလေ့လာပြီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါ။ သင်တစ်ခုလိုချင်ပါသလား ဤတွင်သင်ရွေးချယ်ဖို့ဘယ်လိုသိကြလိမ့်မည်။
ဒီမှာလျှပ်စစ်ကားအကြောင်းလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ၎င်း၏သမိုင်းမှသည်၎င်း၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုရန်။ သင်ပိုမိုသိလိုပါသလား
ဤဆောင်းပါးတွင်နေရောင်ခြည်သုံးရေစုပ်စက်များ၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အသုံးပြုမှုအကြောင်းဖော်ပြထားသည်။ သင်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသိလိုပါသလား။ သင်၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီမည်သည့်အပိုင်းသည်ပိုကောင်းမည်နည်း။
ဒီပို့စ်မှာဟိုက်ဒရိုဂျင်အင်ဂျင်ရဲ့လည်ပတ်မှု၊ ၎င်း၏ပြproblemsနာများ၊ အဓိကလက္ခဏာများနှင့်ဒဏ္sာရီများအကြောင်းဖော်ပြထားသည်။ သင်ပိုမိုသိရှိလိုပါသလား?
နည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများကနေနှင့်လေကိုအသုံးပြုရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ အဘယ်ပစ္စည်းများကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုမည်နည်း။ ကျနော်တို့ဘယ်လိုထိရောက်မှုတိုးတက်စေရန်သွားမည်နည်း
ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန်မိုဘိုင်းယူနစ် Aurora သည်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်များနှင့်လေစွမ်းအင်တာဘိုင်များတပ်ဆင်ရန်နှင့်လူသားချင်းစာနာမှုအကျပ်အတည်းကာလတွင်သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုသယ်ယူပို့ဆောင်ပေးနိုင်သည်။
အိန္ဒိယတွင်ညီအစ်ကိုနှစ် ဦး သည်စွမ်းအင်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကိုအဆုံးသတ်ရန်အတွက်စမတ်ဖုန်းတစ်လုံး၏ဈေးနှုန်းဖြင့်အလွန်တန်ဖိုးနည်းသောလူနေအိမ်လေလေတာဘိုင်တစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
တက်စလာသည်လျှပ်စစ်ကွန်ယက်အတွင်းမကြာခဏကျဆင်းခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်တောင်သြစတြေးလျပြည်နယ်တွင်ဘက်ထရီကိုတပ်ဆင်သည်။ ၎င်းသည် twitter တွင်လောင်းကြေးကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးဖြစ်သည်။
ဤပို့စ်တွင် Valencia ကို ၁၀၀% လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များဝယ်ယူမှုအကြောင်းပြောထားသည်။ သင်ပိုမိုသိလိုပါသလား
Ie tram သည်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ရေရှည်တည်တံ့နိုင်သောရွေ့လျားမှုလောကတွင်ပြောင်းလဲခြင်းအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည် သင်ပိုမိုသိရှိလိုပါသလား?
Schiphol နှင့်အခြားဒတ်ခ်ျလေဆိပ် ၃ ခုသည် ၂၀၁၈ တွင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကိုသာအသုံးပြုမည်
Schiphol အုပ်စု (အမ်စတာဒမ်၊ အီဒင်ဗင်၊ ရော့တာဒမ်နှင့် Lelystad) တို့၏လေဆိပ်များသည်ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်မှစ၍ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကိုသာသီးသန့်လည်ပတ်မည်ဖြစ်သည်။
၁၇၀၀ ကီလိုမီတာအကွာအဝေးမရှိဘဲခရီးသွားနိုင်သည့်လျှပ်စစ်ကားတစ်စီးဖြစ်သည့် Lightyear One
Lightyear One သည်လျှပ်စစ်နှင့်ဆိုလာကားဖြစ်ပြီးရာသီဥတုအခြေအနေပေါ် မူတည်၍ အားသွင်းခြင်းမရှိဘဲကီလိုမီတာ ၁၇၀၀၀ ကျော်မောင်းနှင်နိုင်သည်။
Global Electric Vehicle Outlook သည်လေ့လာမှုတစ်ခုအရလာမည့်ဆယ်နှစ်အတွင်းလျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်အရေအတွက်သုံးဆတိုးပွားလာလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းထားသည်။
WaveStar ဆိုသည်မှာ Wave စွမ်းအင်ဖြစ်သော Wave စွမ်းအင်ကိုရာသီဥတုဆိုးရွားမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိအောင်အနှောင့်အယှက်မရှိထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
Tesla Pickup ကိုစတင်ရန် Elon Musk ကကြေငြာခဲ့သည်
တက်စလာသည်လအနည်းငယ်အတွင်းလျှပ်စစ်ထရပ်ကားတစ်စီးနှင့်နှစ်နှစ်မပြည့်မီလျှပ်စစ်ထရပ်ကားတစ်စင်းဖြင့်“ နောက်အဆင့်သို့အလေးအနက်ထားရန်” အဆင်သင့်ရှိသည်။
LIFE + Methamorpohis စီမံကိန်းတွင်စွန့်ပစ်ရေကိုစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြု၍ ၎င်းကိုဇီဝလောင်စာအဖြစ်အသုံးပြုသည်။
အချို့ကလျှပ်စစ်ကားများရပ်ရန်လာသည်ဟုဆိုကြသည်။ ဒါကမှန်ရမယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ထုတ်လုပ်သူတွေပိုပိုပြီးလုပ်နေကြတယ်
ဘဏ္institutionာရေးအဖွဲ့အစည်းသည်“ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ရရှိရန်လွယ်ကူချောမွေ့စေရန် ရည်ရွယ်၍ တီထွင်ထားသော” Green Loan ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
NASA ၏ပထမဆုံးလျှပ်စစ်လေယာဉ် (X-57 Maxwell)
Electric propulsion သည်အမေရိကန်စမ်းသပ်လေယာဉ်မိသားစုအတွင်းသို့ရောက်ရှိသွားသည်။ လျှပ်စစ်လေယာဉ်ပျံ၏ပစ္စုပ္ပန်နှင့်အနာဂတ်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်
19ပြီ ၁၉ ရက်သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစက်ဘီးနေ့ဖြစ်သည်။ စက်ဘီးစီးသူများအားခုခံကာကွယ်ရန်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများအားအခြားနည်းလမ်းများပေးရန်တိုက်တွန်းရန်လူသိများသောနေ့ဖြစ်သည်
လူများနှင့် CircuitoEco မှထုတ်လုပ်သော kinetic energy ဖြင့်သွားသောအားကစားရုံ
လေ့ကျင့်ခန်းများမှထုတ်လုပ်သည့်ရွေ့လျားစွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုသောအားကစားရုံများကလှေကိုရွက်လွှင့်ရန်သို့မဟုတ် Eco Circuit ဖြင့်လက်ကိုင်ဖုန်းများကိုအားသွင်းရန်။
ဤစီမံကိန်းကို Horizon 2020 စီမံကိန်းမှရန်ပုံငွေဖြင့်ထောက်ပံ့ထားပြီး ၄ င်း၏ပထမဆုံး full-scale Watly စက်ကိုတင်ပြတော့မည်။
Hybrid ကားများသည်လောင်စာစုဆောင်းခြင်းမှအကျိုးပြုပြီးသဘာဝဖြစ်စဉ်များကို အခြေခံ၍ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာ algorithms များထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
Jaguar က ၃၅၄ ကီလိုမီတာအကွာအဝေးရှိတဲ့ SUV ကားပုံစံမှာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးလျှပ်စစ်ကားကိုပြသခဲ့သည်။
Volkswagen ၏လျှပ်စစ်ကားသည် ၁၅ မိနစ်အားသွင်း။ ၄၈၂ ကီလိုမီတာအကွာအဝေးတွင်ရှိသည်
၁၅ မိနစ်အကြာတွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းသို့မဟုတ် 15 အစောပိုင်းတွင်ရောက်ရှိလာမည့် Volkswagen လျှပ်စစ်ကားသည်အကွာအဝေး ၄၈၂ ကီလိုမီတာရှိသည်။
Iberdrola ၀ န်ထမ်းများအားလျှပ်စစ်ကား ၀ ယ်ရန် ၆၀၀၀ နှင့်ကူညီလိမ့်မည်
Iberdrola ၏ ၀ န်ထမ်းများသည်ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီ၏ကတိက ၀ တ်ကြောင့်လျှပ်စစ်ကား ၀ ယ်ရန် ၆၀၀၀ နှင့်ကူညီလိမ့်မည်။
တက်စလာသည် SolarCity ကို ၀ ယ်သည်။ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကိုပေါင်းစည်းသည်
Tesla ၏ဘီလျံနာသူဌေးဖြစ်သော Elon Musk သည်ဒေါ်လာ ၂.၆ ဘီလီယံဖြင့် SolarCity ကုမ္ပဏီကို ၀ ယ်ရန်နောက်ဆုံးတွင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
SALSA စီမံကိန်း - ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ဖြင့်လျှပ်စစ်ကားများကိုအားသွင်းပါ
Albufera စွမ်းအင်သိုလှောင်ခြင်း၊ စွမ်းအင်နှင့်ဘက်ထရီများအထူးထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များကိုပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ဖြင့်အားသွင်းရန် SALSA စီမံကိန်းကိုဖန်တီးသည်။
Mercedez-Benz သည်ပထမ ဦး ဆုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးသောထရပ်ကားကြီးကိုပြသခဲ့သည်
Mercedes-Benz သည် Tesla ကိုကျော်ဖြတ်ပြီးမြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပစ်မှတ်ထားသောပထမဆုံးလျှပ်စစ်လေးလံသောထရပ်ကားကိုပြသခဲ့သည်။
တက်စလာသည်ကမ္ဘာ့ကြီးစိုးမှုစီမံကိန်း - ထရပ်ကား၊ ဘတ်စ်ကားများနှင့်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုကြေငြာခဲ့သည်
တက်စလာ၏အစီအစဉ်သစ်သည်လာမည့်နှစ်တွင်ဘတ်စ်ကားများနှင့်လေးလံသောထရပ်ကားများထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်ကြောင်းကုမ္ပဏီ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Elon Musk ကပြောကြားခဲ့သည်
2016, သဘာဝ aspirated အင်ဂျင်၏ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က?
Mercedes သို့မဟုတ် BMW သုံးစွဲသူများအတွက်ရွေးချယ်စရာမရှိတော့ပါ။ အင်ဂျင်အားလုံး၊ ဓာတ်ဆီသို့မဟုတ်ဒီဇယ်အားလုံးတွင်တာဘိုအားသွင်းစက်ရှိသည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကီလိုမီတာ ၅၀၀ ရှိသော Nissan LEAF
၂၀၁၇ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်စီးပွားဖြစ်ရောင်းချနိုင်မည့်ကီလိုမီတာ ၅၀၀ သည် Nissan LEAF ၏အကွာအဝေးဖြစ်သည်။
BMW သည် ၁၀၀% လျှပ်စစ်လယ်ထွန်စက်နောက်တွဲများကိုလမ်းများပေါ်တွင်တင်သည်
ပြီးခဲ့သည့်အင်္ဂါနေ့က BMW သည် ၁၀၀% လျှပ်စစ်ထွန်စက်နောက်တွဲကိုကီလိုမီတာ ၁၀၀ ၀ န်းကျင်ရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။
Renault Zoe လျှပ်စစ်ကားကိုရောင်းပြီးဖြစ်သည်
Renault Zoe လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်သည် lithium-ion ဘက်ထရီပါသောလျှပ်စစ်ကားများအတွက်ပထမဆုံးအလောင်းအစားဖြစ်သည်။ အော်ဒါများကိုယခုနေရာချပြီးနောက်ဆုံးစျေးနှုန်းမှာယူရို ၁၄,၇၀၀ ဖြစ်သည်။
ပလပ်စတစ်သစ်သားနှင့်၎င်း၏ applications များ
Toyota Prius V ဗားရှင်းသစ်သည်ခရီးသည် ၇ ဦး အတွက်စွမ်းရည်ရှိမည်
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် Toyota သည် Prius V အသစ်အတွက်ဈေးကွက်သို့ရောက်ရှိတော့မည်
လေ၊ လှိုင်း၊ ဒီရေ၊ အပူချိန်နှင့်ဆားပါဝင်မှုကွဲပြားခြားနားမှုများသည်သင့်လျော်သောနည်းပညာဖြင့်ပင်လယ်နှင့်သမုဒ္ဒရာများကိုပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေနိုင်သည့်အခြေအနေများဖြစ်သည်။
Piezoelectric စွမ်းအင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ရွေ့လျားသောအခါအချို့သောပစ္စည်းများတွင်လူသားများထုတ်လုပ်သောဖိအား (သို့) ပွတ်တိုက်အားဖြင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ အဆိုပါပစ္စည်းများသဘာဝသို့မဟုတ်ဒြပ်ဖြစ်ကြသည်။
လီသီယမ်သည် ၂၁ ရာစု၏အရေးအကြီးဆုံးသဘာဝအရင်းအမြစ်များအနက်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်
ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အပေါ်အခြေခံသည့်နည်းပညာနှင့်နည်းစနစ်များသည်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်တိုးတက်နေသည်။ ဒါပေမယ့်နိုင်ငံအချို့ရှိပါတယ် ...